Igwe na-ekpo ọkụ - Jiangsu Runau Electronics Manufacturing Co., Ltd.
Rectifier diode Mgbawa
Oge Control Thyristor
High Standard adọ Control Thyristor
High Power Free sere n’elu adọ Control Thyristor
Fast Gbanye Thyristor
High Standard Fast Gbanye Thyristor
Ọnụ ụzọ Gbanyụọ-Thyristor
Njikwa Thyristor Bi-directional (TRIAC)
Nkịtị Rectifier Diode
Standard Diode na High Junction Okpomọkụ
High Power Free sere n'elu Rectifier Diode
Diode Iweghachite Ọsọ
Ịgbado ọkụ Diode
Module Thyristor gị
Air jụrụ Heatsink SF usoro
Mmiri na-ekpo ọkụ Heatsink SS Series
Okirikiri Rectifier Mmụọ Mmegharị
Mgbakọ Ndị Ọzọ
Itinye n'ọkwa Heating
Ngwaọrụ Eletrọniki Ike Nke Egwuregwu Ọkụ
A na-ejikarị ọkụ ọkụ eme ihe maka ịkpụchasị ọla, ichekwa ọkụ, nsị, ịgbado ọkụ, ịgbanye, iwe iwe, diathermy, nhicha mmiri mmiri, ọgwụgwọ ọkụ, ikpo ọkpọkọ, na uto kristal. Onyinye ike na-abanye n'ime ya na-eme ka okirikiri nke ikuku na-agbanwe agbanwe, sekit inverter, circuit circuit, njikwa na nchedo circuit.
Igwe ọkụ na-enye ike na-ebugharị ọkụ maka teknụzụ ọkụ bụ teknụzụ na-agbanwezi ike ugboro ugboro (50Hz) iji duzie ike wee gbanwee ugboro ugboro (400Hz ~ 200kHz) site na ngwaọrụ semiconductor dị ka thyristor, MOSFET ma ọ bụ IGBT. Nkà na ụzụ na-ejikwa usoro nchịkwa na-agbanwe agbanwe, ike mmepụta nnukwu, na arụmọrụ dị elu karịa nke otu, na-adaba iji gbanwee ugboro ole dịka ihe achọrọ kpo oku.
Ihe ndozi nke akụrụngwa obere na ọkara na-ebunye ngwa ọrụ thyristor na-edozi isi atọ. Maka akụrụngwa ike ọkọnọ ike dị elu, a ga-etinye 12-pulse thyristor ndozi iji melite ogo ike nke ike ma belata grid-side harmonic current. Inverter ike unit mejupụtara elu-voltaji elu-ugbu a ngwa ngwa mgba ọkụ thyristor ukem mgbe usoro jikọọ na-aghọta na elu ike mmepụta.
Inverter na resonant circuit nwere ike kere abụọ ụdị dị ka bughi Njirimara: 1) yiri resonant ụdị, 2) usoro resonant ụdị.
Paradị ihe yiri nke a: a na-eji akwa-thyristor dị elu (SCR) mee ihe dị elu nke na-eme ka ihe ọkụkụ dị ugbu a, a na-enwetakwa ike dị elu site na nchịkwa nke thyristors. The resonant circuit n'ozuzu na-eji a zuru ezu yiri resonance Ọdịdị, na-ahọrọ abụọ-voltaji ma ọ bụ transformer mode dịkwuo voltaji na inductor dị ka dị iche iche chọrọ, tumadi etinyere na kpo oku ọgwụgwọ usoro.
Usoro resonant ụdị: nnukwu-voltage elu-ugbu a mmiri-mma thyristor (SCR) na ngwa ngwa diode na-eji na-etolite a voltaji-ụdị inverter ike unit, na elu ike mmepụta na-ghọtara site superposition nke thyristors. Resonance circuit na-eji usoro resonance usoro, na onye na-agbanwe ihe ọkụ ka o kwekọọ na ibu chọrọ. Na mgbakwunye na uru nke nnukwu ike na-akpata na Grid-n'akụkụ, ike mgbanwe dị iche iche, arụmọrụ dị elu na arụmọrụ dị elu na-amalite, ọ na-abụwanye ebe a na-ejikarị eme ihe na afọ ndị dị ugbu a ma na-etinyekarị ya na usoro ịgbaze.
Mgbe mmezi nke n'ichepụta usoro, Runau arụpụtara ngwa ngwa mgba ọkụ thyristor eji neutron radieshon na ndị ọzọ na Filiks n'ihu n'ihu-ebelata na-apụ oge na ike ike na-mma N'ihi.
Ntinye ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ na-ewebata thyristor dị ka isi ngwaọrụ ike kpuchiri mpaghara niile na arụmọrụ ugboro n'okpuru 8kHz. Ejiri ike mmepụta ihe na 50, 160, 250, 500, 1000, 2000, 2500, 3000kW, 5000KW, 10000KW ugboro ọrụ bụ 200Hz, 400Hz, 1kHz, 2.5kHz, 4kHz, 8kHz. Tọn 10, tọn 12, tọn 20 maka nchara nchara na ndoputa ọkụ, isi akụrụngwa bụ ike na-enye ike. Ugbu a ikike kachasị ikike ikike na-abịa 20000KW nke 40Ton. Na thyristor bụ isi ike ntụgharị & ntụgharị ntụgharị iji tinye n'ọrụ.
Oge ejiri Thyristor
Iwuli 3, No 20 Venture Road, Development Mpaghara, Guangling District, Yangzhou City
Ekwentị: + 86-514-87253048